कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले गरे सभापतिमा उम्मेदवारीको घोषणा Arthabyapar.com || Point Media Pvt. Ltd.
१० असोज / अर्थ र व्यापार – नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता प्रकाशमान सिंहले पनि पार्टी सभापतिमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन । गणेशमान सिंहका छोरा एवं कांग्रेसका बरिष्ठ नेता सिंहले अब यस पार्टीमा आमूल परिवर्तन ल्याउनकालागि आफुले सभापतिमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेको बताए । यसैगरि, उनले आफूले पार्टीको ‘नम्बर एक व्यक्ति ’ भएर काम गर्ने निष्कर्ष निकालेको पनि स्पष्ट पारे ।
नेपाली कांग्रेस काठमाडौं महानगरपालिका – १७ नम्बर वडाले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै बरिष्ठ नेता सिंहले यस्तो बताएका हुन । उनले अहिलेसम्म राम्रो अवसर पाएर पनि नेताहरूले अपेक्षाकृत रुपमा काम नगरेका कारण नेपाली कांग्रेस पार्टी लथालिंग अवस्थामा पुगेको भन्दै अब यो पार्टीमा आमुल परिवर्तन ल्याई अघि बढ्नकालागि आगामी नेतृत्वकालागि आफुले पार्टी सभापतिमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेको बताए ।
यसैगरि, बरिष्ठ नेता सिंहले नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनले पनि पूरानै नेताहरूलाई नेतृत्व सुम्पिए कांग्रेसको हालत प्रजापरिषद्को जस्तै हुने चेतावनी दिए । अब यस पार्टीको गरिमालाई थप उच्च बनाएर अघि बड्नुपर्ने बेला आएकाले अहिले आफुले पार्टी सभापतिमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्न बाध्य भएको बताउँदै उनले सिंगो पार्टी पंक्तिलाई संस्थागत ढंगले अघि बढाउन पनि आफूले पार्टीको ‘नम्बर एक व्यक्ति ’ भएर काम गर्न चाहेको धारणा राखे ।
यसैगरि, नेता सिंहले आफूले लामो समयदेखि पार्टीको दोस्रो तहमा रहेर काम गरिसकेकाले पनि अब सभापति भएर काम गर्न चाहेको बताए । उनले आफूले नेतृत्व लिएपछि पार्टीलाई विधिसम्मत ढंगले अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । बरिष्ठ नेता सिंहले अझै पनि यस पार्टीका नेतृत्वले १४ औं महाधिवेशनको मिति फेरि पनि सार्ने षडयन्त्र भइरहेको भन्दै तिब्र आक्रोश पोखे । अझै नेतृत्व तहबाट यस पार्टीलाई बन्धक बनाई राख्न खोजे ठुलो दुर्घटना निम्तिने चेतावनी समेत दिए । सिंहले अब आफु कुनै हालतमा पनि सभापतिको उम्मेद्वारबाट पछि नहट्ने दावी गरे ।
अहिले आफू सम्पूर्णरुपले यस पार्टीको सभापति बन्न सक्षम रहेको दावी गर्दै उनले अब कुनै हालतमा पनि आफु पछि नहट्ने बताए । अहिले सिंहले आमजनताको दुःखमा मलमपट्टी लगाउनकालागि भए पनि आफू कांग्रेस सभापति बन्नुपर्ने अवस्था आइलागेको बताए ।
‘आम जनताको दुःखमा मलमपट्टी लगाउनको लागि भएपनि म कांग्रेसको सभापति बन्नु पर्छ’, सिंहले भने, ‘सबैलाई मिलाउन सक्ने क्षमता छ । पार्टी सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमता छ । म किन पार्टी सभापति नबन्ने ? त्यसैले अब सभापतिको उम्मेद्वारीबाट पछि हट्दिन ।’ यसैगरि, उनले पार्टीको १३ औं महाधिवेशनपछि अहिले नेपाली कांग्रेस इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुगेको बताए । नेतृत्व गलत भए पछि लामो इतिहास बोकेको पार्टी पनि कमजोर हुने बताउँदै उनले क्षमता नभएका र काम गर्न नसक्नेलाई फेरि पनि मौका दिए आफ्नो खुट्टामा आफैं बञ्चरो प्रहार गरे सरह हुने धारणा राखे ।
सान्दार मतसहित एमाले अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली पुनः विजयी
एमालेको महाधिवेशनले सौराहाका तीनसय होटलका ३५०० भन्दाबढी कोठा भरिए , झन्डै ३७ करोड रुपैयाँ खर्च